‘लकडाउन्’ पूर्ण रूपमा खुलेको दुई सातापछि एसईई हुने, १२ र ११ को परीक्षा रोकिन सक्ने |
‘लकडाउन्’ पूर्ण रूपमा खुलेको दुई सातापछि एसईई हुने, १२ र ११ को परीक्षा रोकिन सक्ने
२०७६ चैत्र २२ गते, शनिबार , १०:०१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारबाट जारी गरिएको ‘लकडाउन्’ पूर्ण रूपमा खुलेको कम्तिमा दुई सातापछि मात्रै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ‘लकडाउन्’ पूर्णरुपमा खुलेर जनजीवन पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि मात्र परीक्षा गरिने जानकारी दिएको छ ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारण चैत ६ गतेबाट सञ्चालन हुनुपर्ने एसईई परीक्षा हाल स्थगनको अवस्थामा छ । बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले विना कुनै शर्त ‘लकडाउन्’ खुलेपछि एसईईको नयाँ परीक्षा तालिकाका बारेमा जानकारी दिइने बताए ।
विद्यार्थीलाई दुई साताको समय दिएर मात्रै परीक्षा गरिने उनको भनाइ छ । एउटा परीक्षा केन्द्रमा तीन सय जनासम्म विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुने भएकाले भयरहित तरिकाले परीक्षा सञ्चालनका लागि जनजीवन सामान्य अवस्थामा आउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
अहिलको अवस्थामा भने कहिले परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही भन्न नसकिने उनले बताए । १२ र ११ को परीक्षा रोकिन सक्ने सरकारले चैत २५ गतेसम्मका लागि जारी गरेको ‘लकडाउन्’ थप गरिएको अवस्थामा कक्षा १२ र ११ को वार्षिक परीक्षासमेत स्थगित हुने भएको छ ।
यस विषयमा सरकारले लिने पछिल्लो निर्णयपछि मात्रै निचोडमा पुगिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलले ‘लकडाउन्’ लम्ब्याइएको अवस्थामा कक्षा १२ र ११ को वार्षिक परीक्षा रोकिने बताए ।
बोर्डले २०७७ साल बैशाख दोस्रो साताबाट कक्षा १२ तथा बैशाख तेस्रो साताबाट कक्षा ११ को परीक्षा तय गरेको छ । लक डाउन खुलेको अवस्थामा पूर्व निर्धा्रित कार्यतालिका अनुसार नै गर्न सकिने जनाइएको छ ।
कक्षा १२ र ११ को परीक्षाका लागि आवश्यक तयारी गरिएकाले पूर्व निर्धा्रित कार्यतालिका अनुसार नै गर्न सकिने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
अघिल्लो सामाग्री१९ करोड थान ५०० का नोट छाप्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
पछिल्लो सामाग्री‘लकडाउन्’ अवधिभर छुटमा खाद्यान्न विक्री गरिने